शेरधनपीडित युवतीमाथि खुमलटारमा हातपात « हाम्रो ईकोनोमी
बालुवाटार र शीतल निवासबाट केही पार नलागेपछि ‘न्याय चाहियो’ भन्दै खुमलटार पुगेकी युवतीलाई ‘घिसारेर चोकमा पु¥याइयो र पिटपाट’ गरेर लखेटियो । उनले रुँदै व्यथा सुनाइन्, ‘मेरालागि लडिदिने कोही भएनन् घटना अस्ति सोमबार बिहानको हो ।
प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईबाट उनी सञ्चारमन्त्री भएकै बेला कार्यकक्षमै यौन दुव्र्यवहारमा परेको दावी गर्ने बालिका खड्का खुमलटारस्थित प्रचण्ड निवासमा यस्तो दुव्र्यवहारमा परेको भन्छिन् । त्यसअघि भृकुटीमण्डपनेर राष्ट्रिय सभागृहको हलमा पाँच दिनसम्म जारी पार्टी केन्द्रीय कमिटी बैठकको पाँचै दिन उनी त्यहाँ धर्ना बसेकी थिइन्, दुबै अध्यक्षसँग एकैचोटि भेट्न पाउनुपर्ने माग गर्दै । तर, पाँचै दिन माग सुनुवाई भएन । त्यसपछि बैठक सकिएकै दिन, आइतबार दिउँसो गृह मन्त्रालय पुगिन् ।
मन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार सूर्यप्रकाश सुवेदी (पथिक) लाई भेटिन् । पथिकले ‘पार्टीको मामिला मन्त्रालयबाट सुल्झिँदैन, महासचिव विष्णु पौडेलसँग भेट्नु, भनी भैंसेपाटी पठाए । उनी सोमबार बिहानै भैंसेपाटी पुगिन् । महासचिवले ‘अध्यक्षलाई भन्नुस्, मलाई भनेर हुँदैन’ भनेपछि बालिकाले ‘बालुवाटारको अध्यक्ष भेट्न गयो, मेनगेटबाटै लखेट्छन् । खुमलटार गयो भने भेटै पाइँदैन’ भनिन् ।
त्यसपछि विष्णुले ‘खुमलटार जानुस् न त, आफ्नै अध्यक्ष हो, भेट भइहाल्छ नि †’ भन्दै पन्छाए । खुमलटार पुग्दा ‘तपाईं कति आउनु भएको यहाँ ? काम पाउनुभएन ? जानुस्, आफ्नो बाटो लाग्नुस्’ भन्दै प्रमुख स्वकीय सचिव जोखबहादुर महराले हकारे । तर, बालिका जान मानिनन् । ड्युटीमा रहेका महिला प्रहरीलाई बोलाएर ‘उहाँलाई यहाँबाट निकाल्नुस्’ भन्ने निर्देशन दिइयो । महिला प्रहरीले गेटबाहिरसम्म लगेको प्रचण्डको सचिवालयका सदस्यहरूले बताएका छन् । तर, बालिकाले जनआस्थालाई भनिन्, ‘मलाई चोकमा लगेर पिटे । यो काम जोखबहादुर महरा र गंगा दाहालले गरेका हुन् । अध्यक्षलाई शायद यो घटना थाहा छैन ।’
उनले तीन महिनाअघि प्रेस सल्लाहार विष्णुप्रसाद सापकोटा (जुगल) को सहयोगमा दुईचोटि अध्यक्षसँग भेट भएको सुनाइन् । भेट हुँदा शेरधनविरुद्ध उजुरी दिइन् । उक्त भेटमा प्रचण्डले भन्नुभएको थियो, ‘नआत्तिकन बस्नुस् । यो कुराको समाधान गरौँला । केपी कमरेडलाई म पनि भन्छु । उहाँ अलिक सञ्चो भएपछि तपाईंसँग मै भेट गराइदिन्छु । तपाईंले धाइरहनु पनि पर्दैन । यदि अन्याय भएको छ भने न्याय पाउनुपर्छ ।’ तर, उनले न अध्यक्ष केपी ओलीसँग भेट्न पाइन्, न उजुरीको अहिलेसम्म सुनुवाई नै भयो । केन्द्रीय कमिटी बैठकका दौरान पनि दुबै अध्यक्ष भेट्न नपाएपछि सोमबार खुमलटार पुगेकी हुन् । उनका अनुसार, उनी शेरधनबाट पीडित भएजस्तै प्रचण्डकी कान्छी छोरीले पनि पूर्वपतिबाट पीडित भएर अर्को घरजम गरेकी हुन् । उनैको योजनामा आफूमाथि भौतिक आक्रमणसम्म गराउने काम भयो । तर, यो कुरामा सत्यता नभएको प्रचण्डको सचिवालयले जनआस्थालाई बताएको छ ।
पार्टी बैठकको पहिलो दिन शेरधन त्यहाँ उपस्थित थिए । तर, बाहिर बालिकाको आवतजावत चल्न थाल्यो भन्ने सुनेपछि दोस्रो दिनदेखिको बैठकमा एकछिन–एकछिनमात्रै जाने र हिँडिहाल्ने गर्न थाले । पाँच दिन चलेको बैठकमा तीन दिनमात्रै बसे, चौथो दिन प्रदेशका मन्त्रीसहित विराटनगर फर्किए । केपी ओलीको अघिल्लो कार्यकालमा बालिका प्रमको सचिवालयमा उपस्वकीय सचिव थिइन् । सँगै युवा संघको केन्द्रीय सदस्य पनि ।
तर, अहिले यो मामिला चर्किएपछि सबै जिम्मेवारीबाट मुक्त गरिएकी छन् । ‘म पीडित हुँ । मलाई न्याय दिइनुपर्ने, उल्टै मैँमाथि एकपछि अर्को अन्याय थोपरिएको छ’, उनले जनआस्थासँग भनिन्, ‘मैले खोजेको केही होइन, न्याय मात्रै चाहियो । अर्को पक्षलाई सँगै राखेर कुरा गर्न पाउनुप¥यो । समाधान खोजौँ भनेकी हुँ । ममाथि भएको अन्यायलाई समझदारीमा मिलाउन चाहेकी छु । तर, मलाई बाटोबाटै धपाउने काम भइरहेको छ ।’